Beyrut Waxaa lagu qabtay munaasabad loogu duceynayo dadkii ku dhintay qaraxa | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Beyrut Waxaa lagu qabtay munaasabad loogu duceynayo dadkii ku dhintay qaraxa
Shacabka magaalada Beyrut ayaa ka qeyb galay munaasabad Alle bari ah oo loogu duceynayay in ka badan 200 qof oo ku geeriyootay qaraxii toddobaad ka hor gilgilay caasimadda Lubnaan.
Qoraalka sawirka,Munaasabad loogu duceynayo dadkii ku dhintay qaraxa oo lagu qabtay Beyrut
Dadweyne badan ayaa isugu uruuray meel u dhaw halkii uu qaraxa ka dhacay, waxay u duceynayeen dadkii ku dhintay halkaas, waxay munaasabaddan qabteen abbaare 18:09 oo ku beegeen waqtigii uu qaraxa dhacay.
Dad badan oo reer Lubnaan waxay aaminsan yihiin dayac dhanka dowladda ay sabab u ahayd qaraxyada.
Qoraalka sawirka,Dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda oo ka dhacay Beyrut
Ra’iisul wasaare Xasan Diab ayaa shaley ku dhawaaqay in xukuumaddiisa ay is casihay, wuxuu xilka qabtay bishii Jannaayo xilli uu taageero ka helayay ururka Xisbullah.
Wuxuu sheegay in Lubnaan ay u baahan tahay isbadello la taaban karo oo dhanka hogaanka. Wuxuu ku baaqay in baaritaan caalami ah lagu sameeyo wixii dhacay.
Beyrut Waxaa lagu qabtay munaasabad loogu duceynayo dadkii ku dhintay qaraxa was last modified: August 12th, 2020 by Admin
Dhageyso:_Warka Duhur ee Idaacda Warsan